घोडाले मानिस हैन मानिसले घोडा बोकेको कहिलै देख्नुभएको थिएन यहाँ हेर्नुहोस् – hamrosandesh.com
सामान्यतया घोडाले मानिसलाई बोक्न सक्छ । तर के मानिसले घोडालाई बोक्न सक्छ ? यो सुन्दा मात्रै पनि मानिसहरु हैरान हुन्छन् तर यो सत्य हो । केही मानिसहरूलाई घोडा चढ्न मनपर्छ । ऊँट चढ्न मन पराउनेहरु पनि हुन्छन् ।
तर के तपाईंले कतै देख्नु भएको छ कि मानिसहरूले घोडालाई आफ्नो काँधमा राख्छन् वा काँधमा राखेर घुम्दछन् ? तपाईं हामीले सोच्न पनि नसक्ने कुरामा विश्वका एक व्यक्ति वास्तिवक रुपमा गरेर देखाउन सक्छन् । सामाजिक सञ्जालमा दिमित्री नामका एक व्यक्तिको भिडियो भाइरल भइरहेको छ । उनी युक्रेनका बासिन्दा हुन् ।
उनी धेरै कुराहरु एक हातले गर्न सक्छन् । दिमित्रीले आफ्नो काँधमा घोडा राखेको भिडियो र तस्विर पछिल्ला दिनहरूमा धेरै भाइरल हुँदैछन् । उनी संसारका सब भन्दा शक्तिशाली मानिसहरूमध्येमा पर्छन् । दमित्रीले भिडियोहरु आफ्नो इन्टाग्राम खातामार्फत साझा गर्दै आएका छन् ।
उनले ६० पटक गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा आफ्नो नाम दर्ता गराएको जानकारी दिइएको छ । उनी दाँतले बाक्लो फलामको रक भाँच्न सक्छन् । उनी पहिले सर्कसमा काम गर्दै आएका थिए ।
उनी आफ्नो हातले १५२ किलोग्राम भारी बोक्न सक्छन् । दिमित्री यात्रुहरूले भरिएको कार पनि बोक्न सक्छन् । घोडा मात्र हैन तर दिमित्रीले अन्य ठुलो जनावरहरू पनि बोक्छन् ।
दिमित्रीको घोडा बोकेका भिडियोहरु पुनः भाइरल भइरहेका छन् । सबै जना उनको क्षमतालाई देखेर छक्क परिरहेका छन् । छातीमाथि ठुलो ढुङ्गा राखेर फुटाउन पनि उनले सक्छन् । लामो मेहनतपछि उनी यस्तो अवस्थामा पुगेको बताइएको छ ।